Manchester Iyo Chelsea Oo Barbaro Gool La’aan Ah Ku Kala Baxay Kulankii Ka Dhacay Old Trafford +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester Iyo Chelsea Oo Barbaro Gool La’aan Ah Ku Kala Baxay Kulankii Ka Dhacay Old Trafford +Sawirro
Manchester iyo Chelsea ayaa ku kala baxay barbaro gool la’aan ah kulankii ka dhacay Old Trafford ayaana soo dhamaaday iyadoo aan lakala guul helin.
kooxda martida loo ahaa ayaan kulankeedii lixaad wax guul ah helin inkastoo ay dhibic heshay kadib guuldarooyin afar ahaa oo is xigay, lamana hubo waxa uu ku dambeyn doono mustaqbalka Louis Van Gaal.
Red Devils haatan waxey leedahay 30-dhibcood iyadoo joogta booska 6-aad ee horyaalka waxeyna hogaanka u jirtaa 9-dhibcood, halka Blues ay fadhiso booska 14-aad iyadoo leh 20-dhibcood waxeyna hogaanka u jirtaa 19-dhibcood.
Jawiga ciyaarta ayaa ku bilowday si dar-dar leh iyadoo kooxda Manchester United oo kaashaneysa Jamaahiirteeda ay bilowgii ciyaartaba bilowday iney cadaadis hor leh saarto Blues.
Juan Mata ayaa ku dhawaaday inuu durba hogaanka u dhiibo Manchester United markii uu kubad ka helay Rooney isagoo ku sugan xerada ganaaxa, xidiga reer Spain ayaa sameeyay isku day fiican balse kubadii uu goolka aadiyay birta kore ayey ku dhacday daqiiqadii 2-aad.
Kabtan John Terry ayaa ka bixiyay jawaab cad waxyar kadib markii uu damcay inuu hogaanka isna u dhiibo kooxdiisa isagoo aad u madaxeeyay kubad koorne ka timid balse goolhaye David De Gea ayaa ka beeniyay daqiiqadii 5-aad.
Durba labada kooxood ayaaba ku sigtay iney iska dhaliyaan min gool iyo gool balse ma noqon.
Morgan Schneiderlin ayaa sameeyay isku day uu ku doonayay inuu kooxdiisa hogaanka ugu dhiibo balse kubad awood leh oo uu tuuray meel goosha u dhaw ayey martay daqiiqadii 9-aad ee ciyaarta.
Anthony Martial ayaa halis galiyay goolka Chelsea markii uu kubad la dhex qaaday daafaca Chelsea ka hor inta uusan kubad joog hoose goosha aadin balse birta ayaa ka beenisay daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta.
Anthony Martial ayaa mar kale isku dayay inuu dhexqaado qaado daafaca Blues, balse Kourt Zouma ayaa ku riday xerada ganaaxa inkastoo garsoore Martin Atkinson uusan waxba kasoo qaadin daqiiqadii 21-aad ee ciyaarta.
Rooney ayaa sameeyay isku day kale oo halis galiyay Chelsea markii uu kubad ka awood leh goolka uga tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa, balse goolhaye Thibaut Courtios ayaa si aan caadi aheyn isaga saaray daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta.
Labada kooxood ayaan midna ku guuleysan iney hesho gool qeybta hore ciyaarta iyadoo qeybta koowaad lagu kala maray barbaro gool la’aan ah.
Qeybtii labaad ayaa la isku soo laabtay iyadoo labada kooxood ay garoonka lasoo galeen waji ka duwan kii qeybtii hore.
Pedro iyo Azpelicueta ayaa laba jeer oo is xigay daqiiqad waxka yar gudahood u dhawaaday iney hogaanka u dhiibaan Blues markii ay laba jeer goolka kubad aadiyeen balse De Gea ayaa si hal-haleel ah u badbaadiyay daqiiqadii 48-aad.
Thibaut Courtios ayaa badbaadiyay kubad qatar aheyd oo ay kooxdiisa dhibaato kula kulmi laheyd markii uu diilinta kasoo bixiyay kubad uu damcay inuu gool u badalo Herrera kaas oo kubad ka helay Martial daqiiqadii 56-aad.
Nemanja Matic ayaa noqday mid aan kooxdiisa uga faa’ideyn kubad hal iyo hal ah oo uu ka hortagay goolhaye De Gea markii uu kubad meel dheer ah ka helay Pedro, xidiga reer Serbia meel sare ayuu iska mariyay kubada daqiiqadii 62-aad.
Manchester United ayaa cadaadis ba’an saartay Chelsea iyadoo Jamaahiirta kooxdan ay xamaasad saa’id ah u yeelayeen ciyaarta, Blues ayaana aheyd koox mar walba ku jirta iska caabin sare.
Wayne Rooney ayaa hawada ku daray kubad uu damcay inuu goosha la beegsado markii uu kubad geesta kasoo qaaday Martial xidiga reer England ayaana ka faaideysan kubadaas daqiiqadii 86-aad.
Jamaahiirta Manchester United ayaan ka daalin iney ku qeyliyaan (Attack-Attack-Attack – Weerar-Weerar-Weerar) iyagoo lidi kaga dhigaya falsafada macalinka cadaadiska badan uu saaran yahay ee Louis Van Gaal.
Dadaal badan kadib kulankii darbiga ahaa ayaa soo idlaaday iyadoo labada kooxood aysan midna guusha helin waxaana lagu kala baxay barbardhac gool la’aan ah.
Manchester United ayaana wax guul ah helin lixdii kulan ee ugu dambeysay halka Blues iyana labadii kulan ee ugu dambeysay aysan wax guul ah helin.
Ugu dambeyntiina Red Devils waxey joogtaa booska 6-aad waxeyna 10-dhibcood ka saryesaa Blues oo fadhisa booska 14-aad.